Telo volana eo izay dia nisy zavatra nahatonga saina ahy izay mety efa tao anatiko foana fa nampanginiko fotsiny. Nisy antony aloha nahatonga an’ilay izy lasa tena tsapako be e. Nisy olona hitako mantsy. Fantatro izy fa tia ahy ary izaho koa tia azy saingy nanapa-kevitra ny tsy hiaraka izahay satria samy manam-bady ary samy tsy te-hampirafy. Na izany aza dia nahatonga ahy nandinika ny fiainako iny fifanenanana tamin’i L. iny.
Tsy ory fa manana ny ampy saingy …
Manam-bady aho efa ho 13 taona izao. Manan-janaka roa izahay. Milamina ny fiainanay raha atao indray mijery satria efa manana trano tsara tarehy izahay. Manana fiara. Azo lazaina hoe : manana ny ampy. Ny marina anefa dia efa in-efatra aho izao no saika hisaraka tamin’io vadiko io satria tsy mahatsiaro ho sambatra aho miaraka aminy. Tsapako fa tsy tena tiako izy. Manana “affection” aminy aho ekeko fa tsy fitiavana. Tsy ilay afo miredareda mampangitakitaka sy mampisamboaravoara rehefa mahita ny olon-tiana no tsapako ho azy. Mety marobe ny olona hanome tsiny ahy nefa ity kosa angamba inoako fa iraisan’ny vehivavy rehetra. Mila mitia aho ary mila mahatsapa koa fa tian’olona izay hananako « estime ». Mila olona mitarika ahy hanana fijery miabo sy manao izay mahasambatra ahy aho. Mila mahatsapa hoe : afaka ny ho “fière” amin’ny olon-tiako. Tena mifanohitra tanteraka amin’ireo ny vadiko. Rehefa tsy manitsy ahy na mitsara ahy izy dia tsy mivaky loha loatra amiko. Marina fa misy ny vola izay omeny hiadanako ary avelany manao izay tiako aho na dia arahin-datsa ihany aza izany indraindray. Fa tsy ny vola no mahasambatra. Misy oha-pitenenana izay milaza hoe : « ny fo nahatsapa tena fitiavana dia tsy hanadino mandrakizay. Ary marina ilay izy ! Mety avy amin’izay koa ve ny olako ? Ny marina dia efa hatrany am-boalohany no tsy tiako io vadiko io fa nosafidiako sy nekeko ho vadiana fotsiny. Nanantena aho hoe : azo volena io fitiavana io ka ho tiako ihany izy rehefa ela ny ela. Ilay olona niaraka tamiko teo alohany no tena tiako ary tsy nety afaka tao am-poko mihitsy ny fitiavako azy saingy tsy nety ny anay. Mety avy amin’izay ve? Tsy te-hamitaka ny vadiko aho saingy tena te-hitroatra ny ao anatin’ny foko. Inona re no azoko hatao ?